ဖွင့်လှစ် ပိတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဖွင့်လှစ် ပိတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ဖွင့်လှစ် ပိတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး ဖွင့်လှစ် ပိတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသုံးချ တွင် ထိန်းချုပ်မှုlတွင်g အမျိုးမျိုးသော အဆို့ရှင် နှင့် အခြား တူသော ထုတ်ကုန်, တွင်clude လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, ဂိတ် အဆို့ရှင်, ထိန်းချုပ်မှု အခင်အရှင် နှင့် etc.The AOX-M စီးရီး ဖွင့်လှစ် ပိတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r များမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ နှင့် liftတွင်g rတွင်g ဘို့ လွယ်ကူသော hနှင့်lတွင်g နှင့် အပေါ် site ကို တွင်stallatiအပေါ်.Sတွင်ce 1997, AOX ရှိပါတယ် လုပ် တိုင်း efဘို့t သို့ ပို့ အဆိုပါ အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေး ထုတ်ကုန် နှင့် န်ဆောင်မှုများ ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers.Through တွင်novative စီမံခန့်ခွဲမှု, နည်းပညာ တိုးတက်ရေး နှင့် လူ့ resကျွန်တော်တို့၏ces စီမံခန့်ခွဲမှု, ကျွန်တော်တို့ လိမ့်မည် ကြိုးစား သို့ ခဲ နှင့် မြှင့်တင်ရန် အဆိုပါ တိုးတက်ရေး ၏ အဆိုပါ တွင်dustry.We များမှာ expectတွင်g ဖြစ်လာသည် yကျွန်တော်တို့၏ lအပေါ်g သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် Chတွင်a.
connection အရွယ်အစား: ISO5210 (ထိုး torque အမျိုးအစား) နှင့် JB2920 (သုံးလက်သည်းအမျိုးအစား)
အနီအောက်ရောင်ခြည် setting ကိုအတူ 1. နောက်ဆုံးရ Non-ထိုးဖောက်ဒီဇိုင်း
အဆိုပါ AOX-M စီးရီး၏ setting ကိုနှင့်ရောဂါရှာဖွေပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အနီးကပ်ဖွင့်အိမ်ရာဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲ, display screen သို့ပိတျထားသောမှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ setting ကို tools များနှင့် display ကိုမျက်နှာပြင်အကြားတရားဝင်အကွာအဝေး 1-1.5m အကြောင်းပါ။
2. Diferent ထိန်းချုပ်မှုရွေးချယ်စရာသင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း။
AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဖွင့် / ချွတ်နှင့်အသိဉာဏ် Module ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် fieldbus interface ကိုရိုးရှင်းကနေအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
3. အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်အနေအထား display ကိုရှင်းလင်းစွာအဆို့ရှင်၏ status ညွှန်ပြခြင်းနှင့် AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အနီးကပ်ဖွင့်လှစ်။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်အနီးကပ်ဖွင့်လှစ်ပြသနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှားအာရှအတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-M စီးရီး၏အသွင်အပြင်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးအနီးကပ်ဖွင့်လှစ်သေချာနိုင်ပါတယ်။
မေး:? ငါသည်သင်တို့၏ AOX-M စီးရီးငါပြီးနောက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့သင့်ရဲ့ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုငျသညျ့အခါပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အနီးကပ်ဖွင့်လှစ်စိတ်ဝင်စားတယ်လိုလျှင်
Q: ကိုဝယ်စေချင် 100 ခန့်ကိုအပိုင်းပိုင်း AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အနီးကပ်ဖွင့်ပေမယ့်ကျွန်မတဦးတည်းကြိုးစားကြည့်ချင် firist ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏တောင်းဆိုမှုကို၏ဘယ်လိုထင်သလဲ
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-M စီးရီးအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ငါပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn အနီးကပ်ဖွင့်လှစ်သင့်ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
hot Tags:: ဖွင့်လှစ် ပိတ် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်